Vaovao - Inona ny hoavin'ny manampahaizana manokana momba ny milina NC ary ahoana ny fomba hisafidianana?
Any Chine, ny fahaizan'ny milina cnc dia nanjary universal tamin'ny folo taona lasa, ary ny mpamokatra milina cnc dia mivelatra amin'ny toerana rehetra. Ny tokonam-baravaran'ny orinasam-pivarotana NC dia miha ambany sy ambany ary ny fampiasana teknolojia ny fahaizan'ny milina NC dia be mpampiasa kokoa. Veloma ny vanim-potoanan'ny millet sy ny basy.
Noho ny fiakaran'ny Internet tato ho ato dia mihamaro ny tanora manenjika ny asan'ny Internet, izay miteraka tsy fahampian'ny talenta eo amin'ny sehatry ny milina NC. Ny fambolena matihanina amin'ny milina NC dia tsy mety. Toy izany koa eo amin'ny sehatry ny fikarohana sy ny fampivoarana ny fitaovana milina CNC. Ny fanavaozana ny haitao matihanina amin'ny milina CNC dia tsy azo sarahina amin'ny fitaovana sy ny haitao. Amin'ny fanadihadiana farany dia ny tsy fisian'ny fitarihan'ny matihanina amin'ny milina CNC Io no iray amin'ireo antony lehibe mahatonga ny teknolojia fanaraha-maso isa isa eto an-toerana ao ambadik'i Japon sy Alemana.
Ny teknolojia fanaraha-maso isa, fantatra amin'ny anarana hoe teknolojia fanaraha-maso isa isa amin'ny solosaina, dia ny teknolojia mahatsapa ny fifehezana programa nomerika amin'ny alàlan'ny solosaina. Ny torolàlana mikraoba vokarin'ny solosaina amin'ny alàlan'ny fanodinana baiko dia ampitaina amin'ny fitaovana servo drive handroahana ny motera na ny actuator hydraulic mba handroahana ireo fitaovana hiasa. Ireo matihanina ao amin'ny CNC dia ireo mpiasa mahavita ity andiam-pandehanana ity ary talenta ara-teknika tena matihanina. Amin'izao fotoana izao, ny talenta toy izany amin'ny ankapobeny dia azo alaina amin'ny fantsona roa: ny iray dia talenta nampiofanin'ny sekoly fiofanana matihanina NC machining; ny iray hafa dia ny talenta matihanina sy ara-teknika an'ny CNC izay mihalehibe aorian'ny fianaran'ny mpandraharaha ny teknolojia CNC amin'ny alàlan'ny fampiofanana ataon'ireo orinasa.
Amin'ny vanim-potoana fanavaozana ny vokatra, ny kalitao sy ny marim-pototry ny vokatra dia mihamafy hatrany ary ny fepetra takiana amin'ny fahaizan'ny machining CNC dia avo kokoa ihany koa. Ny tsy fahampian'ny talenta amin'ny fahaizan'ny milina CNC dia nahatonga ny tsy fahampian'ny talenta eo amin'ny tsena volombava manga. Amin'ny ho avy, izy io koa dia ho iray amin'ny sokajy talenta hiveloman'ireo orinasa.